Vahoaka matin’ny fahantrana, FAT miliba amin’ny vola be – MyDago.com aime Madagascar
Ny hari-karenam-pirenena anatiny (PIB) Malagasy ny taona 2009 dia -4,5%, raha 7,8% izany talohan’ny fanoganam-panjakana. Ny fisondrotan’ny hari-karena anefa dia miankina indrindra amin’ny loharanom-bola avy any ivelany izay mikatonana tanteraka amin’izao fotoana izao. Marihina eto fa tsy nomen’ny ny vondrona europeana ilay vola 650.000.00 euros saika entina hanampiana an’i Madagasikara, efa nikatona koa ny tsena makany Etazonia dia ny AGOA izay nampitombo 160000 tsy an’asa. Raha tsy ireo fotsiny no resahina.
Nihetsika teo aloha teo ny mpianatra fa tsy voaloha ny vatsim-pianarany sy sy ampy ny fiatovana ary ny trano hianarana avy hatrany moa dia notifirina tamin’ny basy ireo mpianatra ka nisy ny naratra sy maty. Nirongatra koa ny mpitsabo mpanampy ka tsipaka ambava-fo no nasetrin’ny FAT izay. Hoy indrindra mantsy i andry rajoelina hoe : « amin’ny izao toe-javatra ankehitriny izay dia tsy afaka manome ny FAT satria tsy misy ny vola ». Nefa notapahina ny nanaovana an’ny lapan’ny tanana sy Anjontsobe izay handaniana vola tsy toko tsy forahana.
Tsy misy vola intsony handoavana ny karaman’ny mpiasam-mpanjakana, fa amin’ity volana jona ity no farany, aorianan’izay dia tsy hisy intsony. Ka asakasak’ireo mpiasam-mpanjakana tsy mbola sahy mijoro fa mijery ny tombontsoany manokana sy miandry ny vokatry ny tolon’ny hafa fotsiny.
Na dia misy aza izany anefa dia mbola mamoaka volam-panjankana be dia be ny FAT:
Eo amin’ny 3000 000.000 fmg eoeo no hatokan’ny F.A.T hanaovana ilay fihaonambem-pirenena (Conference nationale) miaraka amin’ny ireo fiaraha-monim-pirennena miara-mitsikombakomba aminy sy ireo hataony hoe Raiamandreny mijoro.
Ny vola entina hakalazana ny faha 50 taonan’ny fahaleovantena dia 1.100.000.000.000 Fmg no ho laniana. Ny mahazendana fa ventisina tokoa ny rehareha amin’ny maha Malagasy sy nyfitivan-tanidrazana nefa dia ny frantsay no manosika ireo FAT nanao ny fanoganam-panjakana sy ny mitazona azy eo, ary koa mbola mpanakanto vahiny no handoavam-bolo be hanaovana izany fankalazana izany. Ary ny fanombohana izany fankalazana izany dia nisongadina tamin’ny tsy fahaiza-miasa fa tsy nandeha ny herim-baratra ka tsy nijanona ela ny olona sady ilay hira natokana hoan’izany dia tsy ilay nandresy tamin’ny fifaninana dia Raherinsoanjato Noëlson Marcellin, izay fantatra amin’ny anarana hoe: Ramah hira tamin’ilay hira hoe: ‘Malagasy ô ! mijoroa’. Kanefa dia lasa ny hiran’I max exception indray no noraisina.
Be tokoa ny fa asa raha mbola tadidintsika ilay fanodikodinana fiaramanidin’ny Air Madagascar tokony ho any Paris dia lasa tany Dakar, ary fankalazana tany Paris ny andro nahaterahany dia nandandy 10.000 euros isan’olona.
Ny vahoaka Malagasy anefa izao dia be no zara raha mihinana, mitombo ny ny fahantrana ary mihena ny fahefa-mividy. Ny zanaka Malagasy efa tsy afaka mandoaha vatsim-pianarana intsony,ary ny ray aman-dreny. Etsy andanin’izany anefa dia mihopapana ny karamn’ireo mpikambana ao amin’ny FAT sy ny governemamtany ary ireo mpiara-mitsikombakomba aminy ka tsy maheno akory ny fahalafosan’ny fiainana sy ny fijalian’ny vahoaka. 80.000.000 fmg ny karamany. Ry alain ramaroson moa dia nividy Hummer na irony fiara tsy matahoddalana irony, any amin’ny 40.000 euros any no vidin’ireny.
Nandaniam-bolam-mpanjankana ataon’ny F.A.T ary mianga avy amin’ny halatra sy ny tsy fanarahan-dalàna avokoa izany toy ny halatra ny vary sy menaky TIKO ny fananan’nt FJKM toy ny fanitso ciment béton…. Tsy lazaina intsony moa ireo haltra ataon’ny mpitandro ny filaminana, asa raha tadidintsika tamin’ny fitsarana ilay mpanao gazety teny Anosy tamin’ny avril 2009, fa saika nifampitifitra ny BAC (Brigade Anti Criminalité) sy ny FIS (Force d’Intervention Spéciale) satria ity farany dia nanery olona iray mpana-bola hanome 16.000.000 ariary ho azy ireo, Tany marovoay sy teny ambohibaomoa dia tratra koa ireo dia nagalatra indray ry zareo ka tratra, ny teny amin’ny Fort Duschesne tamin’ny 20 mai moa dia mazava fa ny vola, izay mety avy tamin’ny halatra, an’ni jeneraly Viennot zafera antapitrinsany maro, dia nalain’ny FIS ankeriny. Tao amin’ny biraon’ny FIGN. Ny Halatra bois de rose moa tsy mijanona mihitsy ka ilay sambo frantsay an’ny orinasa Bolloré no mitatitra izany, ary ilay praiministra mpisandoka fahefahana camille vital dia efa nanome alalana. Ny 10 jona lasa teo dia mbola containers 19 no nahondrana.
Fanjakan’ny mpangalatra no eto ary ny marina indray no ahiditra am-ponja. Koa mijoroa ry malagasy handrodana io fanjakan’ny mpangalatra, izay mitazona fahefana nagalarina sy tazomina amin’ny basy.
26 JONA TSY MANANGATSAINA SY TSY MANDRAY ANJARA @ IZAY ZAVA-DREHETRA KARAKARAIN’NY F.A.T
Manampy ny FIGN isika vahoaka
Tian’ny vahoaka, mahasoa azy … Tiako
Auteur LazalazaoPublié le 13 juin 2010 18 septembre 2010 Catégories Economy, Malagasy, Militaires, Politique
12 réflexions sur « Vahoaka matin’ny fahantrana, FAT miliba amin’ny vola be »
Tena mety e, tsy mangan-tsaina no tsy mandray anjara @ ireny fikarakarana na fijerevana ireny zavatra karakarain’ny F.A.T ireny. Momofona mpanjankana loatra.
Ho an.yt DIASPORA sy LEGALISTES ampitadranomasina ,
aza mandray anjara koa aminy fety atao n y ambassades sy consulats…
avelao mitanjaka rery eo ny akama ny Faty…
Tsy managan-tsaina no TYS MANNDRAY ANJARA @ IZAY ZAVATRA KARAKARAIN’NY F.A.T na eto Madagasika na hoan’ireo Malagasy any ivelany. Aza misy manatanteraka izany fety izany fa fahaleovantena anarany fotsiny izao. Ny frantsay no mamboatra ny tantatra dia ny Malagasy tadiavina hiteny hoe : »OUI MONSIEUR ».
14 juin 2010 à 5 h 31 min
Tena marina ny teninao ry Lazalazao!
Ary tsy mba menatra akory ireo FAT’n’alika ireo fa dia tsy manafina an’izany hoe milelaka izay tsy tokony ho lelafina amin’ireo Frantay ireo!
Tsy henatra, tsy tahotra, tsy fanenenana,… fa tena maty eritreritra mihitsy!
Manamafy koa aho eto ho an’ireo tena TIA TANINDRAZANA ary mitolona HO AN’NY FAHALALAHANA sy ny FAHAMARINANA: aza misy manangan-tsaina mihitsy fa miendrika ho mpivarotra Tanindrazana izany, satria SAROTSAROM-PAHALEOVANTENA FOTSINY IZAO!
Ary maninona moa no mpihira any ivelany no antsoina?… Satria tsy mety miditra amin’izany ny Mpihira Malagasy izay TENA TIA TANINDRAZANA!
14 juin 2010 à 5 h 36 min
Voalaza eo @ lahantsoratra fa 40.000euros ny vidin’ny Hummer iray. Io vidy io dia t@ 2004. tao @ salon de l’automobile, fa ny nahadiso ahy dia OFFRE SPACIALe izy io satria nanao dokambarotra ilay orina’asa. Taitra aho androany fa nahita fa 300.000 euros no vidin’ny Hummer iray, rehefa avy nanotany namana mpivarotra fiarakodia iray .Ka noho izany dia ahitsiko ny voalaza etsy ambony 300.000 euros no vidin’ny Hummer iray fa tsy 40.000 euros.
14 juin 2010 à 6 h 40 min
oh! re olona eh!
misy olona mienvite hono tokoa ny havanay eo @ branchoirs ao @ ILE DE LA RÉUNION hanao fety ny 25 juin ….a,draso ho teneniko tsy hande fa toa loza toko izany kou……
zao aloha efa t@ heritaona no tsy nanao fety 26 juin eh!
14 juin 2010 à 9 h 28 min
aza mijery baolina ;aza mandeha manitsaka ny lalana eto ;aza manao fanadinana;aza omena arendrina ny zanakao sns;manaova solomaso mainty raha mandeha ny afomanga ;sns ;gaga be aho ;izany ve no hampiverina @fitondrana an,i dada?
Volaniana, Manao fety sy mifalia fa aza miaraka @ F.A.T raha ny solotenan’ny FAT no manao izany fety @ 25 izany dia aleo tsy tonga
LUCAS, mpandray an-tendrony ianao, fa hanao fety be ny zanak’i dada @ 26 fa fety tsy misy foza.
vanille chocolat dit :
Raha sakanana ny tsy hijerena baolina ets…mba hitanao ve ireo sary ambony ireo? Ireo ankizy ireo koa dia tsy manana safidy!!!!!!.Ary mino aho araka ny voalaza tetsy aloha,misaona ny saina mpirenena raha misy maty ireo zanaky ny malagasy ,noho ny izy ireo manambara ny zavatra tsy mety sy ny heviny,na toa ka tsy mitovy aza satria; »REPOBLIKA DEMOKRATIKA MALAGASY » Ny aty @nay fidiana ny omena invitation ka tsy olana. Asa???
ty LUCAS tia tena mitampy fa aiza aho izao fa tsy mijery coupe du monde miaraka @ vadiamanjanako …..
ary nahita any DADA Ravalomanana alavitra aho dia ontsa ny foko tsy afaka mba nanoroka azy sy Neny lalao drisy mantsy ry DADa……
samy eto Johannesburg ny Maputo isika nefa tsy hafaka mifanantona mifamangy sy miresaka eh!
DADA be garde du corps an!
zany fanajany olona azy aty tena ndray!!!!!
15 juin 2010 à 19 h 06 min
Ity no tena vaovao, misy ny vola hanaovana trano sy hividianana 4×4 vola avy any @ bois de rose sy reny malala. FA tsy misy ny vola hanokafana ny orinasa sy ny tranombarotra ary ny karaman’ny mpiasa.
noho izay tsy misy mandray anjara @ fetin’ny FAT
24 juin 2010 à 7 h 21 min
Aleon’ny FAT manodikodina saim-bahoaka, ireny podium sy fampisehoana ireny dia tsy ho jerenay akory. Kassav izany tsy atakalonay ny tanindrazanay ka sady tsy hijery izahay no hangan-tsaina. Na dia misy aza ny faneriterena @ fananganan-tsaina.
Précédent Article précédent : Hadinohy aho, vavak’i Rado
Suivant Article suivant : Tsy manangan-tsaina, tsy mandray anjara amin’ny fetin’ny HAT